13 × 10 Podcast: Manomboka ny Krismasy ao amin'ny Apple | Avy amin'ny mac aho
Taorian’ny olana ara-teknika madinidinika ny talata lasa teo, dia ny alin’ny alarobia teo no vita ihany mivantana amin'ny #podcastApple. Amin'ity fizarana vaovao amin'ny podcast ity dia miresaka lohahevitra isan-karazany mifandraika amin'ny fahatongavan'ireo serivisy Apple Fitness + vaovao, Apple One Premium sy ny maro hafa. Noresahinay ihany koa ny fahatongavan'ny headphone Beats Fit Pro vaovao sy ny olana hafa ankehitriny toy ny notches amin'ny MacBook Pro na ny "olana" iaretan'ny mpampiasa sasany amin'ny macOS Monterey.
Avelantsika eto ny Lahatsary YouTube izay anaovanay ny live:
Ity no rohy hidiranao fantsona YouTube anay ary afaka manaraka anay amin'ny fizarana manaraka mivantana ianao na afaka mankafy ny podcast navoaka tao iTunes (ao anatin'ny ora vitsivitsy manaraka) hihainoana azy isaky ny misy na aiza na aiza no tianao. Raha manana fanontaniana na tolo-kevitra ianao ary mieritreritra ianao fa afaka manome hevitra momba izany amin'ny podcast ianao dia afaka manao izany mivantana amin'ny alàlan'ny chat azo amin'ny YouTube, amin'ny alàlan'ny tenifototra#podcastapple ao amin'ny Twitter na avy any fantsona Telegram anay Marihina fa maimaim-poana ho an'ny rehetra izany ary mihamaro hatrany isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Podcast 13 × 10: Manomboka ao amin'ny Apple ny Krismasy
Mujjo dia manatsara teboka iray hafa amin'ny tranga ho an'ny iPhone 13